प्रियंकाको अफर श्रद्धाले मानिनन् | Jukson
प्रियंकाको अफर श्रद्धाले मानिनन्
बलिउडमा विभिन्न खालका गसिपले सधै नै चर्चा पाइरहेका हुन्छन् । कलाकारहरुको गसिप त बलिउड बजारमा सधै नै छाइरहन्छ । बलिउडमा अहिले प्रियंका चोपडा र श्रद्धा कपुरको चर्चा पनि खुबै छ । यही चर्चाको समयमा एउटा खबर आएको छ, जसले श्रद्धाको व्यस्ततालाई दर्शाउँछ ।
श्रद्धा कपुरले नायिका प्रियंका चोपडाको अफरलाई अस्विकार गरेकी छिन् । प्रियंका आफ्नो प्रोडक्शनमा ‘म्याडम जी’ नामक चलचित्र बनाउँदैछिन् । पि्रयंका यो चलचित्रको मुख्य भूमिकामा देखिने तयारीमा छिन् । तर, उनले चलचित्रको एक विशेष भूमिकाका लागि श्रद्धा कपुरलाई अफर गरेकी थिइन् । त, श्रद्धाले प्रियंकाको अफरलाई अस्विकार गरेकी हुन् ।
श्रद्धासँग अहिले प्रियंकाको चलचित्र गर्ने समय नै छैन । यसैले समय नमिलेका कारण उनले प्रियंकाको अफरलाई अस्विकार गर्नुपरेको हो ।
तर, यो अफरले दुई नायिकाको सम्बन्धलाई विगार्छ कि भन्ने चर्चा पनि चलेको छ ।
पूनम पाण्डेसँग चलचित्र खेल्न २५ हजार यूवक आतुर
दोषी पाइए सन्नीलाई पाँच वर्ष जेल!
महोत्तरीमा ट्रयाक्टरले च्यापिएर चालकको मृत्यु
एसएलसी पासपछि ११ मा पढ्न कति ल्याउनेले के पढ्न पाउने ?
पोखराको फुलबारीमा कार र मोटरसाइकल ठोकियो : एक घाईते
बिखण्डनकारीहरुले सामाजिक सदभाव खल्बल्याउने दुस्प्रयास गरिरहेकोः ः प्रधानसेनापति क्षेत्री